Ukubuyiselwa Kwemithombo Yezokuxhumana Ekutshalweni Kwezimali Awukulinganisi | Martech Zone
Uma kukhulunywa iqiniso, izinkampani eziningi engisebenze nazo zibe nobunzima ekulandeleni nasekulinganiseni buyela kutshalomali uma kuziwa ezinkundleni zokuxhumana. Kunezindlela ezimbalwa eziyisisekelo zokukhiqiza inani emizameni yezokuxhumana yenhlangano yakho:
Ngabe inani lomthamo oya ebhizinisini lakho lingakubiza ini ku-Pay Per Click? - Njengoba amagama angukhiye nezindleko zokukhokha ngokuchofoza ngakunye zishicilelwa, ungafanisa amagama akho angukhiye ku analytics kuzindleko zokukhokha ngokuchofoza kwemigomo efanayo. Hlanganisa izinombolo futhi imvamisa unendaba emnandi kakhulu ongayitshela inhlangano yakho ngemali oyilondoloze inkampani.
Ungakanani inani lokuthengisa ongalichaza ngqo kuma-social media? - Ukulandelela ukuthengisa okuqondile kusuka emithonjeni yezokuxhumana kuyindlela eqinisekile yokubonisa inzuzo ekutshalweni kwemali. Okufakwe kulokhu, yiqiniso, izinjini zokusesha - ezizoshayela inani elikhulu lethrafikhi enkampanini yakho ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana.
Ochwepheshe abaningi bezokumaketha online kanye nabezokuxhumana babonelwa kude. Umthelela wembuyiselo ekutshalweni kwemali ungaphezu kwalokhu ngokuchofoza okuqondile. Enye ye- ElikaDavid Armano imidwebo evela eminyakeni edlule enye engiqhubeka nokuhlanganyela ngayo:
The imbuyiselo encedisayo ekutshalweni kwemali akulula ukukala, kepha kukhona. Imiyalezo yami namakhasimende ukuthi singakwazi isiqalo ngokulinganisa ukubuya kotshalo-mali ngezindlela ezimbili zokuqala - kepha kuzoba nezinye izindlela eziningi lapho inkampani yakho izobona khona ukubuya ekutshalweni kwayo ekuxhumaneni nomphakathi:
Ukuba ngumholi wokucabanga embonini yakho - uma ungacabangi ukuthi ukuthengisa kungavela ngokumane kukhishwe igama lakho embonini, wenza iphutha. Ukhiye wezokuxhumana ungeza isici somuntu kumkhiqizo ngoba wakha ukwethembana. Ukwethenjwa kuyisihluthulelo sempumelelo yebhizinisi. Lapho usuqale ukubamba iqhaza emithonjeni yezokuxhumana ngentshiseko, uvame ukumenywa ukuba ukhulume ezingqungqutheleni zezimboni nakumaqabane, imicimbi, ama-webinars, njll.
Ukwakha Ubudlelwano Bomuntu Namakhasimende akho - kunzima ukushiya abantu esikhula sibathanda. Abantu kwesinye isikhathi bayiglue oyidingayo ebudlelwaneni bebhizinisi ukugcina amakhasimende. Akuwona wonke amaqiniso nezibalo, izikhathi eziningi kunalokho okungeziwe okuncane okwenziwa ngabantu. Abasebenzi abenza umehluko nabezindaba bezenhlalo bakuvumela ukuthi ubone ngemuva komkhiqizo futhi uxhumane uqobo nabantu abasebhizinisini.
Ukumaketha kwe-Word of Mouth - kufakazelwe ukuthi kungenye yezindlela ezisebenza kahle kakhulu zokumaketha ibhizinisi, kepha akuyona into engenziwa ngobuciko (abaningi bazama). Ezingxoxweni zokuxhumana nomphakathi, ngincoma izinkampani, imikhiqizo kanye nezinsizakalo noma kunini lapho ngikwazi khona. Lokhu imvamisa kuyindlela yokuziphatha kumanethiwekhi - cela usizo noma ukuthuthukisa insizakalo futhi abantu basakaze igama!
Ukwakha Idumela - Idumela liyikho konke ku-inthanethi, futhi kwenza idumela elihle kusayithi lakho, kumanethiwekhi wakho wokuxhumana nomphakathi, nasezingosini zamakhasimende akho nakunethiwekhi yokuxhumana nomphakathi kuyisisekelo sokwethenjwa esizokhiqiza ibhizinisi. Ukuthembela kubaluleke kakhulu kunoma yikuphi ukuthengiselana kwebhizinisi, futhi kulula ukunqoba izingqinamba zokwethembana ngokuxhuma mathupha nabantu abangaphansi komkhiqizo.
Isiphathimandla Sezokwakha - kanye nokwakha idumela, futhi wakha umlando ngezinjini zokucinga ezilinganiswa ngazo zombili izingcaphuno kanye nama-backlinks. Lelo dumela eliqhubekayo, elihambisana nezihloko ezithile namagama asemqoka, lizoqhubeka nokukhuthaza okuqukethwe owabelana ngakho kanye namasayithi obhala kuwo phezulu emiphumeleni yenjini yokusesha. Ukusesha kungumthombo omkhulu wokumaketha ku-inthanethi otshaliwe imali. Ungakhohliswa - impumelelo yakho yemidiya yokuxhumana inikela kakhulu kulelo gunya olakhayo ngezinjini zokusesha.
Ukuthengisa okungaqondile - Abantu abaningi abacwaninga kuwebhu bazofunda, bashiye, bafunde, bashiye, bafunde, bahambe, bese bebuya bazibandakanye. Uma ukufundwa kwenziwa kubhulogi kepha ukuguqulwa kwenzeka kusayithi lakho le-ecommerce noma kusayithi lenkampani, kwesinye isikhathi akunakwenzeka ngewebhu analytics ukufaka ukuvakashelwa okuqondile ezinkundleni zokuxhumana. Iqiniso liwukuthi iningi lethu lixhume ngemidiya yezenhlalo kepha wenze ibhizinisi nami ngqo ngaphandle kokusho ibhulogi yami… kepha lalikhona futhi laba nomthelela.
Ukonga Izindleko Zensizakalo - Uma amakhasimende akho efunda amabhulogi akho, ungaba nomthelela omkhulu enanini lezinsizakalo nezindleko zokuphathwa kwe-akhawunti ngokuzifundisa ku-inthanethi. Imithombo yezokuxhumana imvamisa iyindlela eyodwa kuya kwabaningi. Esikhundleni sokubhala i-imeyili uphendula ikhasimende, ubungayibhala ku-inthanethi bese uyikhiphela uquqaba. Kunzima ukukala umsebenzi obekungafanele uwenze - kepha ukhona!
Okuqukethwe kanye Nemiyalezo - nsuku zonke inkampani yakho ebamba iqhaza emithonjeni yezokuxhumana iwusuku lokufunda kwabasebenzi bakho, bazijwayeza ukwakha umlayezo wakho, futhi bawukhangise. Lapho ngi khuluma, ubonisane, futhi ubhulogi ngemithombo yezokuxhumana kanye nomthelela wayo kumabhizinisi, kuba lula kimi ukusiza amathemba amasha namakhasimende aqonde ukuthi angakusebenzisa kanjani. Ngibamba iqhaza engxoxweni, ngifunda okushiwo abanye ochwepheshe, ngibona okuphumelele nokwehluleka, futhi ngikwazi ukukusebenzisa lokho kumakhasimende ami. Kukhona inani elingakholeki kulokhu kepha kunzima ukukala i-ROI.
Khuthaza Ukutshalwa Kakho Kwezimali Kwezenhlalo
Amathuba wokukhomba ahlukile nezindleko eziphansi ngokuchofoza kokukhangisa kwemidiya yezenhlalo kukwenza kube indawo yokuphromotha eyingqayizivele okufanele uyisebenzise ngokuphelele. Uma utshala isikhathi ekwakheni izethameli zemidiya yezokuxhumana noma umphakathi, kungani-ke ungeke ukhule ekutshalweni kwakho futhi uqinisekise ukuthi kufinyelela kubantu abaningi kumanethiwekhi afanele kakhulu? Ukungakhulumi ngeqiniso lokuthi i-Facebook namanye amapulatifomu anikeza ukubekwa okungcono kakhulu ekukhushulweni okukhokhelwe ngaphezulu kokuphilayo!
Akukona KONKE noma akulutho.
Abanye ochwepheshe abasemithonjeni yezokuxhumana abakuboni ukubaluleka kweminye imithombo yezokuxhumana kanye nezingosi zokuxhumana nabantu ezifana ne-Twitter, i-LinkedIn, i-Facebook, njll. Bakholelwa ukuthi kufanele usebenzise sonke isikhathi sakho ukwenza into eyodwa or omunye. Bathanda ukuqhathanisa amapulatifomu namasu okukhomba isu labo njenge eyodwa kuphela ozochitha isikhathi Ngakho konke izinsiza zakho ku nokuthi kufanele usebenzise Lutho nakwabanye.
Engikubonile ezinkundleni zokuxhumana ukusetshenziswa ngempumelelo kwendlela ngayinye ukukhuthaza amandla ayo nokugwema ubuthakathaka bayo. I-Twitter iyindlela enhle yokufinyelela kubantu abaningi ngomzamo omncane kakhulu…. kepha akuyona indawo esebenzayo yezihloko (ezinjengalokhu okuthunyelwe) ezidinga incazelo eningiliziwe yesihloko. Ibhulogi yami iyindlela ephelele yokuthola incazelo eningiliziwe. Ngakho-ke - emizuzwini embalwa i-tweet izothunyelwa ngokuzenzakalela, nge- I-Hootsuite kubalandeli bami abangaphezu kuka-80,000 nabangobuchwepheshe… okuholela izivakashi eziningi emuva kubhulogi lami, ezinye zizokwabelana ngokuthunyelwe, futhi nembuyiselo ekutshalweni kwemali iyoba yinhle impela.
Tags: ukunikezwa kwezokuxhumanaezokuxhumana namakhasimendeukubuya kwezokuxhumana ekutshalweni kwemaliizinkundla zokuxhumana roiyokuthengisa ezokuxhumizindleko zokuhamba kwezokuxhumana
Lungiselela Ukuchitha Kwakho I-Webinar: I-Webinar ROI Calculator
UJun 7, 2009 ngo-9: 43 AM
Imicabango emihle kakhulu kwi-ROI eqondile nengaqondile yezokuxhumana.
Imithombo yezokuxhumana iyinhlanganisela yemikhakha kusuka eBranding kuya kuPR kuye ekuMaketheni. I-Branding ne-PR imayelana ne-ROI engaqondile ngenkathi ukumaketha kumayelana ne-ROI eqondile.
Kepha uma yonke le misebenzi ifakwa kwifomu elilodwa njengemithombo yezokuxhumana, izinkampani kuzodingeka ziqale zichaze ukuthi zisebenzelani imithombo yezokuxhumana, ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi hlobo luni lwe-ROI olufanele.